OTU ESI ABANYE BIOS N'ENWEGHỊ KEYBOARD - BIOS - 2019
Tinye BIOS n'enweghị keyboard
Onye na-emepụta Xiaomi, nke na-aghọ ngwa ngwa ma bụrụ onye a na-akwanyere ùgwù n'etiti ndị Fans nke gam akporo smartphones, na-enye ndị ọrụ nke ngwaahịa ha ohere kachasị maka ịchịkwa software nke ngwaọrụ. Ihe ngosi a ma ama bụ Xiaomi Redmi Note 4 abụghị otu n'ime okwu a, usoro nke ngwa ngwa, imelite ma weghachite nke a na-atụle na ihe ndị e nyere n'okpuru ebe a.
N'agbanyeghị ọkwa dị elu nke arụmụka ahụ dum na nghazi nke ihe ngwanrọ Xiaomi Redmi Note 4 na ihe ngwanrọ, ọ bụ onye ọ bụla nwere ngwaọrụ nwere ike iju ya anya na ị nwere ike iweghachị usoro ngwanrọ ahụ, n'ihi na ọ na-enye ohere ka ngwaọrụ ahụ zute nhọrọ nke onye ọrụ, ọ bụghị ịkọwa ọnọdụ dị egwu. kwesiri igbake.
Ntuziaka niile dị n'okpuru a na-arụ ọrụ site na njirimara gị! Ọrụ maka ngwaọrụ mebiri site na omume nke onye ọrụ, Nchịkwa nke lumpics.ru na onye edemede nke isiokwu adịghị ebu!
A na-eji ngwaọrụ dị iche iche arụ ọrụ na Xiaomi Redmi Note 4 (X), ụfọdụ n'ime ha agaghịdị achọ onye ọrụ PC. N'okwu a, tupu ịmalite ngwa ngwa, a na-atụ aro ka ị rụọ usoro nhazi, nke ga-ekwe ka ịmepụta n'enweghị nsogbu ịtinye ma ọ bụ gbanwee ngwanrọ, yana iweghachi akụkụ software ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ngwongwo ihe nkesa
Xiaomi Redmi Ntuka 4 bu ihe aturu nke enyere na otutu ederede nke di iche iche na odidi nke ikpe ahu, otutu oru na ncheta ebighi ebi, ma, kariekwa, ngosiputa ngwaike. Iji chọpụta ngwa ngwa nke ngwaọrụ onye ọrụ nwere, a ga-eji tebụl mee ihe:
All usoro ntinye nke software a edepụtara n'okpuru naanị na Xiaomi Redmi Note 4 ngwaọrụ dabere na profaịlụ MediaTek Helio X20 (MT6797). Na tebụl, a na-egosipụta nsụgharị ndị a na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ!
Ụzọ kachasị mfe iji chọpụta nsụgharị ekwentị bụ site n'ile anya na igbe ngwaọrụ.
ma ọ bụ ihe nkwụnye aka na ikpe ahụ.
I nwekwara ike ijide n'aka na ọ bụ aka nke ihe nlereanya ahụ dabeere na MediaTek, na-elele menu menu MIUI. Nkebi "Banyere ekwentị" egosi, n'etiti ihe ndị ọzọ, ọnụ ọgụgụ nke cores processor. Uru nke ngwaọrụ MTC kwesịrị ịbụ dị ka ndị a: "Ten Core Max 2.11Ghz".
Nhọrọ na nchịkọta nke ngwugwu na ngwanrọ
Eleghị anya, tupu ịmaliteghachi OS na Xiaomi Redmi Note 4 (X), onye ọrụ ahụ kọwara njedebe nke usoro ahụ. Nke ahụ bụ, ụdị na mbipute nke ngwanrọ ahụ nke a ga-arụnye dịka nsonaazụ.
Jide n'aka nhọta ziri ezi, yana ịchọta njikọ iji budata nsụgharị dị iche iche nke MIUI, ịnwere ike ịgụ ndụmọdụ dị na isiokwu:
Ihe ọmụmụ: Ịhọrọ MIUI ngwa ngwa
A jikọtara otu njikọ omenala nke Xiaomi Redmi Note 4 na nkọwa nke usoro nhazi nke os dị mma.
Ejikwa ịkwọ ụgbọala
Ya mere, a chọtara ngwaike ngwanrọ na ngwanrọ ngwanrọ dị mkpa. Ị nwere ike ịga n'ihu ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala ahụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na arụ ọrụ na ngwanrọ ahụ abụghị atụmatụ iji PC na ngwaọrụ ndị chọrọ ijikọ ngwaọrụ ahụ site na USB, wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ n'ọdịnihu na-atụ aro ka onye ọ bụla nwe ngwaọrụ ahụ. N'ikpeazụ, nke a nwere ike ịkwado usoro gbasara mmezi ma ọ bụ mweghachi nke ngwaọrụ ahụ.
Gbaa ndị ọkwọ ụgbọala maka nhazi ngwa ngwa Xiaomi Redmi Ntị 4 (X) MTK
A kọwapụtara nkọwa nke usoro nhazi nke usoro ihe ndị a chọrọ ka a kọwaa ya:
Ihe Ọmụmụ: Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka gam akporo firmware
Mpempe akwụkwọ ndabere nke ozi
N'agbanyeghi na akụkụ software nke Xiaomi Redmi Note 4 bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume imebi emebi, njedebe nke ozi dị na ngwaọrụ tupu usoro maka ịtinye gam akporo bụ ihe a na-apụghị izere ezere mgbe ị na-arụ ọrụ ncheta dị egwu. Ya mere, ịmepụta nchekwa ndabere nke ihe niile ịchọrọ tupu ịwụnye software usoro bụ nkwanye na mkpa. A na-akọwa ụzọ dịgasị iche iche iji kwado ozi site na ngwaọrụ Android na ihe:
Ihe Ọmụmụ: Otu esi kwadoro ngwaọrụ gam akporo gị n'ihu ọkụ
Ọtụtụ ndị ọrụ dị mkpa ka ha jiri ọrụ Akaụntụ Mi dịka ngwá ọrụ nchekwa. Echefula ọrụ ndị ọrụ ahụ na-enye, ma e wezụga iji ha dị mfe.
Gụkwuo: Ịdenye na ihichapụ Akaụntụ M
Nkwado ndabere na MiCloud, ma ọ bụrụ na a na-eme ya mgbe niile, na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% obi ike na ihe niile njirimara mgbe arụmọrụ ga-adịghachi mfe.
Gaa na ụdị dị iche iche
Usoro ndị metụtara ịdegharị akụkụ nke ebe nchekwa nke ngwaọrụ ọ bụla Android site n'ọtụtụ ụzọ chọrọ ijiri modes mmalite nke ngwaọrụ ahụ. Maka Music Redmi 4, ndị a bụ ụdịdị "Fastboot" ma "Iweghachite". Inweta ihe omuma banyere uzo isi gbanwee gaa n'uzo kwesiri ekwesiri iputa ihe ndi ozo. N'eziokwu, ọ dị mfe ime.
Na-agba ọsọ na smartphone na "Ngwa Fastboot" O kwesiri ịdị na ngwaọrụ ahụ na ala, n'otu oge jide bọtịnụ ngwaike "Mpịakọta-" + "Nri" ma jide ha ruo mgbe onyinyo nke oke bekee na-arụ ọrụ na robot na ihe odide ahụ na-egosi na ihuenyo ahụ "FASTBOOT".
Iji malite mode smartphone "Iweghachite", jide bọtịnụ ngwaike "Mpịakọta" ma "Kwado", na-emebikwa ngwaọrụ ahụ na mbụ. Ihuenyo mgbe ị na-ebuba n'ime mgbake Xiaomi ga-adị ka nke a:
N'ihe banyere mgbake omenala, akara gburugburu ebe obibi ga-apụta, wee na - akpaghị aka - ihe nchịkọta nhọrọ.
N'ihe niile ụzọ nke Xiaomi Redmi Note 4 (X) ngwa ngwa, ma e wezụga nwelite melite nke mIUI dị na ngwaọrụ ahụ, choro ka bootloader wepu.
Ihe Xiaomi Redmi Note 4 (X) dabere na MediaTek nwere ike ịnwepụ naanị site na usoro ọrụ ahụ! A na-ahazi ihe ngwọta na-akwadoghị maka esemokwu ahụ iji jiri ngwaọrụ ndị nwere nghazi nke Qualcomm!
A na-eme usoro ọrụ nke ịrụ ọrụ mmeghe dịka ntụziaka sitere na ihe dị na njikọ ahụ:
Ihe omumu: Ipughe ngwa ngwa ngwa Xiaomi
A ghaghị ịdebe, ọ bụ ezie na bootloader unlock usoro bụ ọkọlọtọ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile Xiaomi gam akporo ngwaọrụ, iwu ngwa ngwa iji mee nchọpụta nwere ike ịdị iche. Iji chọpụta ma ọ bụrụ na ejidere loader site na ihe nlereanya na ajụjụ, tinye iwu na Fastboot:
fastboot getvar niile
Pịa "Tinye" wee chọta akara na nzaghachi njikwa "emegheghị". Aha "Mba" nchịkọta na-egosi na ekpochi bootloader, "ee" - ekpuchighi.
Ịnye MIUI na omenala omenala na ihe nlereanya a nwere ike ịrụ site na iji ngwaọrụ dị oke ọnụ. Dabere na steeti ngwanrọ nke Xiaomi Redmi Ntụta 4, nakwa ihe mgbaru ọsọ, a họrọ ụfọdụ ngwa. N'okpuru ebe a, na nkọwa nke ụzọ ntinye, a na-egosi maka ọrụ ọ kachasị mma iji ngwaọrụ ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ.
Usoro 1: Nwelite Ngwaọrụ Nyocha System
Usoro kachasị mfe iji wụnye, imelite na ịtinye usoro ngwanrọ na ngwaọrụ ahụ bụ ajụjụ iji ngwa. "Nwelite usoro"Ejiri ya niile na nsụgharị nke MIUI ọrụ maka Xiaomi Redmi Cheta 4 (X).
O doro anya na ngwá ọrụ ahụ bụ iji melite nsụgharị nke MIUI "n'elu ikuku", nke a na-eme fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na akpaghị aka
ma ojiji ya na nke a na-enye ohere ka eweghachite usoro ahụ n'enweghị PC, nke a dịkwa mfe. Nanị ihe ga - ekwe ka ịmepụta usoro a bụ ịgbanyeghachi MIUI mbiba karịa nke ahụ e mere n'oge ahụ.
Download nchịkọta nwụnye MIUI achọrọ site na ebe nrụọrụ weebụ Xiaomi ọrụ na folda ahụ "Dowloaded_rom"kere na ebe nchekwa nke ngwaọrụ.
Nhọrọ. Ọ bụrụ na ebumnuche nke ịmegharị bụ ịgbanwe onye na-emepụta ngwa ngwa na ntanetị kachasị ọhụrụ, ị nweghị ike ibudata ngwugwu ahụ site na saịtị Xiaomi, mana jiri ihe ahụ "Download zuru ngwa ngwa" nhọrọ nhọrọ na ihuenyo "Nwelite usoro". A na - akpọ menu ahụ site na ịpị na mpaghara na onyinyo nke isi atọ, nke dị na akuku elu nke ngwa ngwa ahụ n'aka nri. Mgbe nbudata ngwugwu na ngwucha ya, a ga-enye ya ka ịmegharịa usoro maka usoro dị ọcha nke usoro ngwanrọ ahụ. Nke a ga-edozi ebe nchekwa.
Pịa na onyinyo nke isi atọ wee họrọ ọrụ site na menu ndọpụta. "Họrọ faịlụ ngwa ngwa". Mgbe ahụ, anyị na-achọpụta ụzọ nke ngwugwu ahụ anyị chọrọ iji wụnye na njikwa faili, fanye faịlụ ahọrọ wee pịa "OK".
Ịme usoro ndị a dị n'elu ga-amalite usoro maka ịlele nsụgharị software na iguzosi ike n'ezi ihe nke ngwugwu ebudatara, wee kpochapụ faịlụ ahụ na usoro MIUI.
N'ihe banyere ịgbanwe ụdị MIUI (site na onye mmepụta mbipụta na mbipụta anụ ahụ, dịka dị ka ihe atụ egosipụtara n'okpuru, ma ọ bụ vice versa), a ga-ehichapụ data niile site na ebe nchekwa ngwaọrụ ahụ. Push "Kọwaa ma nweta ume"na mgbe ahụ, anyị kwadoro njikere maka ọnwụ nke ozi site na ịpị bọtịnụ yiri nke ahụ ọzọ.
Omume ndị a ga-eduga n'ichegharị ekwentị ma mmalite mmalite ederede software na ebe nchekwa nke ngwaọrụ ahụ.
Mgbe a kwụsịrị usoro niile, anyị na-enweta MIUI nke "dị ọcha" ma ọ bụ nke a rụpụtara ma ọ bụ nke a họpụtara ma ọ bụ nke a họpụtara ma ọ bụ nke a họpụtara mgbe ọ na-ebudata ngwugwu maka ntinye.
Ọ bụrụ na ehichapụrịrị data ahụ tupu ị wụnye ngwanrọ ahụ, ị ​​ga-ahazi ọrụ niile nke smartphone ọzọ, yana weghachite ozi site na ndabere.
Usoro 2: Ngwaọrụ SP Flash
Ebe ọ bụ na a na-ewu ngwaọrụ ahụ na ngwanrọ ngwaọrụ MediaTek, a pụrụ iji ngwa SP Flash Ngwá ọrụ zuru ụwa ọnụ mee ihe dịka otu ụzọ kachasị dị irè nke ịtinye, imelite ma weghachite ngwaọrụ ahụ.
Site na Ngwá Ọrụ SP Flash, ị nwere ike iwunye ụdị ọ bụla (China / Global) na ụdị (Stable / Onye Mmepụta) MIUI sitere n'aka Xiaomi Redmi Nkọwa 4 (X) (ị ga-achọ archive na faịlụ maka Fastboot firmware).
Ebe nchekwa na ngwa ngwa eji ihe atụ dị n'okpuru dị maka nbudata na njikọ:
Download onye nhazi ngwa ngwa 7.5.25 Xiaomi Redmi Cheta 4 (X) MTK maka ntinye site na SP Flash Tool
Usoro ihe omume ya SP Flash Tool chọrọ ibudata njikọ ahụ:
Download ngwa SP Flash maka Xiaomi Redmi Cheta 4 (X) MTK firmware
Dịka ọmụmaatụ, ka onye na-emepụta flash MIUI 8 site na Flashtool. Download na kpochapu ngwugwu ya site na os os, yana archive na SP Flash Tool.
Maka usoro nhazi na-adịghị mma, ọ ga-adị mkpa iji dochie faịlụ mbiet ahụ. cust.img na ndekọ na ngwa ngwa na otu, mana faịlụ gbanwere. Naanị maka nsụgharị ụwa nke MIUI!
Download onyinyo "cust" maka Xiaomi Redmi Ntụle 4 (X) MTK firmware site na SP Flash Tool
Detuo faịlụ ahụ cust.img, nwetara site na iwepu ebe nchekwa ahụ, ebudatara site na njikọ ahụ e nyere n'elu, ma debe ya na nhichapụ na folda ahụ "ihe oyiyi".
Gbaa ngwa ngwa SP Flash ma mepee oghere ntọala na ụzọ: menu "Nhọrọ" - ihe "Nhọrọ ...".
Na windo nhọrọ, gaa na taabụ "Download" ma tinye igbe nlele n'ime igbe nlele "USB Checksum" ma "Nchekwa Checksum".
Ihe ntinye nke ozo nke i choro ime mgbanwe bu "Njikọ". Gaa na taabụ wee gbanwee ọkụ ahụ "Ngwa USB" na ọnọdụ "Ngwa ọsọ"wee mechie windo ntọala.
Tinye na faịlụ ahụ kwesiri ekwesara iji wepu faịlụ site na nchekwa ahụ site na ịpị "Ntugharị na-ebugharị"wee kwuozie faịlụ ahụ MT6797_Android_scatter.txt na Explorer.
Jide faịlụ ahụ n'ime usoro ihe omume ahụ MTK_AllInOne_DA.bindị na nchekwa FlashTool. Kọwaa ụzọ na ebe faịlụ ahụ dị na Explorer, windo nke ga-emeghe n'ihi ntinye bọtịnụ ahụ "Download Agent". Wee pịa "Meghee".
Anyị na-ewepu igbe dị n'akụkụ ebe. "preloader" na ubi na-egosiputa aha ihe oyiyi maka ngwa ngwa na ụzọ nke ọnọdụ ha, wee malite ndekọ site na ịpị bọtịnụ ahụ "Download".
Anyị jikọtara Xiaomi Redmi Ntụta 4 (X) na eriri USB na PC wee malite ịhụ otú usoro ịfefe faịlụ si enweta. A na-egosipụta ọganihu dịka njirimara jupụtara na-acha edo edo nke dị na ala nke windo ahụ.
Ọ ga-echere nkeji iri. Mgbe ekpuchi window windo ahụ gosipụtara "Download Ok".
Ị nwere ike gbanyụọ smartphone site na USB wee gbanye ya site na ịpị bọtịnụ ahụ "Nri" n'ime 5-10 sekọnd.
Ntuziaka maka ịrụ ọrụ na Redmi Note 4 (X) MTK site na Mpị ọkụ, akọwapụtara n'elu, tinye aka na ngwaọrụ na steeti ọ bụla, gụnyere "gbagọrọ agbagọ," yana ngwaọrụ na bootloader mkpọchi.
Ọ bụrụ na smartphone anaghị amalite, na-adabere na ntutu ihuenyo, wdg. ma ọ dị mkpa ka a wepụ ya na steeti a, anyị na-eme ihe niile dị n'elu, mana nke mbụ ị ga-eji dochie ya na folda ya na ngwa ngwa na mgbakwunye na faịlụ ahụ cust.img nakwa preloader.bin na nke China nke MIUI.
Download faịlụ achọrọ site na njikọ:
Download China-preloader to restore Xiaomi Redmi Nkaba ama 4 (X) MTK site SP Flash Tool
Mgbe ị na-arụ ọrụ mgbake, Xiaomi Redmi Nkọwa 4 (X) MTK site na SP Flash Tool na-agbanye n'ime igbe nlele "preloader" ewepu, ma dekọọ ngalaba niile na-enweghị otu n'ime ọnọdụ "Naanị Naanị".
Usoro 3: Mi Flash
Ntinye ngwanrọ na Xiaomi smartphones na-eji ngwá ọrụ na-emepụta ngwá ọrụ - MiFlash software bụ otu n'ime ụzọ ndị kachasị ewu ewu maka imelite ma weghachite ngwaọrụ. N'ozuzu, iji mepụta usoro nhazi ngwa ngwa na Xiaomi Redmi Note 4 (X) MTK site na anụ ahụ, ị ​​ga-agbaso usoro ntụziaka site na nkuzi na njikọ:
Gụkwuo: Otu esi eme ka Flash Xiaomi smartphone site na MiFlash
Usoro a na-enye ohere itinye ụdị nsụgharị ọ bụla, ụdị na ụdị nke MIUI firmwares ukara na, tinyere SP Flash Ngwaọrụ, bụ ụzọ dị irè iji weghachite smartphone smartphone.
Tupu ịmalite nhazi, ọ dị mkpa iburu n'uche ọtụtụ njirimara njirimara nke Xiaomi Redmi Note 4 (X) MTK mgbe ị na-etinye software site na MiFlash.
Usoro dị mma naanị maka ngwaọrụ na unlocked bootloader!
Ịwụnye usoro ngwanrọ site na MiFlash na Redmi Note 4 (X) MTK ga - achọ ijikọ ekwentị na ngwa na ọnọdụ "Fastboot"ma ọ bụghị "EDL", dị ka ọ dị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ndị ọzọ nke ngwaọrụ Xiaomi.
Echekwala archive ebudatara na faịlụ maka ntinye nke MIUI ka mgbọrọgwụ nke C: ụgbọala. Na mgbakwunye, tupu ịmalite ịmalite, ị kwesịrị ijide n'aka na ndekọ ahụ esighi na folda, ma e wezụga maka "ihe oyiyi". Nke ahụ bụ, ọ ga-abụ dị ka ndị a:
Ma ọ bụghị, ịdekọ ihe oyiyi na ebe nchekwa nke ngwaọrụ ahụ, ị ​​ga-agbaso ntuziaka ndị ahụ dị na njikọ dị n'elu. Mgbe anyị kwusịrị MiFlash, anyị jikọtara ngwaọrụ ahụ, bufee ya na ngwa Fastboot, chọpụta ụzọ na ndekọ ahụ na ngwanrọ ahụ, họrọ ọnọdụ ntanetị ma pịa "Flash".
Anyị na-echere ịmecha usoro ahụ (ozi ahụ "ihe ịga nke ọma" n'ọhịa "rụpụtara" windo MiFlash). The smartphone ga-Malitegharịa ekwentị na-akpaghị aka.
Ọ ka na-eche maka ịmalitepụta nke ihe arụnyere na nbudata nke ụdị a họọrọ na MIUI.
Usoro 4: Fastboot
O nwere ike ime na iji Windows ngwa akọwapụtara n'ụzọ ndị dị n'elu ga-ekwe omume n'ihi ọtụtụ ihe. Mgbe ahụ, iji wụnye usoro na Xiaomi Redmi Note 4 (X) MTK, ịnwere ike iji ngwá ọrụ dị ebube Fastboot. Usoro a kọwara n'okpuru ebe a na-enye gị ohere ịwụnye ụdị mbipute ọ bụla nke MIUI, bụ ihe na-adịghị mma maka ihe onwunwe PC na nsụgharị Windows / bitation, ya mere a ga-atụ aro ka ọ bụrụ ndị niile nwe ngwaọrụ ahụ.
Hụkwa: Otu esi gbanye ekwentị ma ọ bụ mbadamba site Fastboot
Iji nyefee faịlụ mbiet na Redea Note 4 (X) maka nchekwa MTK na-eji Fastboot, ị chọrọ ngwugwu na usoro ihe omume ahụ n'onwe ya, yana ngwa ngwa fastboot kwadoro site n'aka Xiaomi ọrụ weebụ.
Anyị na-akwadebe ngwugwu na faịlụ ngwanrọ. Na ndekọ aha, wepụ faịlụ site na archive na faịlụ Fastboot.
Anyị na-ebufe Xiaomi Redmi Ntụle 4 (X) MTK na ọnọdụ "Fastboot" ma jikọọ ya na cable na PC.
Gbaa akara iwu ahụ. Otu n'ime ụzọ ndị kachasị mfe bụ ịpịkọta ọnụ na keyboard. "Merie" + "R", na window meghere tinye "cmd" ma pịa "Tinye" ma "OK".
Na ndekọ e nwetara n'oge nchịkọta ngwugwu, enwere ederede atọ, otu n'ime ha dị mkpa iji malite usoro ide ihe na nchekwa ekwentị.
Nhọrọ nke faịlụ a dabere na ihe aga-eme, yana site na iji otu edemede, ihe ndị a ga-eme:
flash_all.bat - akụkụ niile nke ebe nchekwa nke ngwaọrụ ahụ ga-edegharị (n'ọtụtụ okwu, ngwọta a kwadoro);
flash_all_lock.bat - na mgbakwunye na idegharị akụkụ niile, bootloader ga-egbochi;
flash_all_except_data_storage.bat - a na-ebufe data gaa na ngalaba niile, ma e wezụga "Onye ọrụ" ma "Nchekwa Ngwaọrụ"ya bụ, ozi onye ọrụ ga-azọpụta.
Dụgharịa edemede ahụ a họọrọ n'ime windo windo akara na òké.
Mgbe etinyere ụzọ na aha aha na windo,
ntinye "Tinye"Nke ahụ ga-amalite usoro nke ịnyefe ihe oyiyi na icheta nke smartphone.
Mgbe ịmechara ndekọ niile data na ebe nchekwa nke Xiaomi Redmi Note 4 (X), edemede ahụ "okokụre ...",
Ngwaọrụ a ga-amaliteghachi na MIUI.
Usoro 5: Iweghachite omenala
Iji wụnye nsụgharị nke MIUI fatịlaịza, dịka ngbanwe nke agbanwe agbanwe na Xiaomi Redmi Note 4 (X), ị ga-achọ ebe nchekwa mgbake omenala TeamWin Recovery (TWRP).
Njide foto na ejiri TWRP
Ihe oyiyi nke TWRP-mgbake, nke a chọrọ maka ntinye na ihe atụ amalebara anya, nwere ike ibudata na njikọ:
Download TeamWin Recovery Image (TWRP) na SuperSU Patch maka Xiaomi Redmi Cheta 4 (X) MTK
Na mgbakwunye na oyiyi nke gburugburu ebe obibi recovery.img, njikọ dị n'elu nbudata nkwụnye ahụ SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zipSite n'itinye ihe, ị nwere ike wụnye SuperSU. Iji zere nsogbu, tupu ịdekọ onyinyo nke mgbake gbanwee, detuo ngwugwu a n'ime ebe nchekwa nke ngwaọrụ (ọ ga-achọ ka arụnye ya ọzọ).
E nwere ọtụtụ ụzọ iji kwadebe ngwaọrụ TWRP, ma nke kachasị mfe bụ faịlụ img na TWRP site Fastboot. Для проведения процедуры нужно выполнить инструкцию по переносу образов в разделы памяти из материала:
После установки TWRP запускаем аппарат в режим рекавери
и действуем следующим образом.
Push "Họrọ Asụsụ" и выбираем русский язык интерфейса.
Сдвигаем вправо переключатель "Kwe Ka Ngbanwe".
Wụnye ngwugwu nke ported mbụ SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip
A chọrọ ihe a, imezighị emezi ga-eduga na eziokwu ahụ enweghị ike ịba n'ime usoro ahụ!
Mgbe ọnọdụ TWRP gbanwee gbanwere na ngwaọrụ ahụ, ịnwere ike ịwụnye MIUI nke dịpụrụ adịpụ site na ngalaba ọ bụla ịchọrọ.
A kọwara nkọwa nke nhọrọ nke ngwọta na ihe dị na njikọ dị n'okpuru, n'otu ebe ị nwere ike ịchọta njikọ iji budata nchịkọta:
N'ihe banyere Xiaomi Redmi Note 4 (X) MTK, i kwesịrị iji nlezianya nyochaa nkọwa nke ihe nlereanya ahụ mgbe ị na-achọ ngwugwu ziri ezi na saịtị nke ndị otu mpaghara! Nbudata faịlụ zipụ ga-enwerịrị aha ya Nikel - aha aha nke smartphone na ajụjụ!
Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-edozi MIUI OS site n'aka ndị otu MIUI Russia - otu n'ime ihe ngwọta na mgbakwunye mgbọrọgwụ na ikike iji nweta mmelite site na OTA.
Anyị na-edezi faịlụ zip nke a chọrọ maka ntinye n'ime ebe nchekwa nke ngwaọrụ ahụ.
Anyị na-aga na mgbake gbanwee ma mechie (nhicha) partitions "Data", "Cache", "Dalvik" (ma e wezụga maka nchekwa ụlọ).
Gụkwuo: Otu esi eji TWRP gbaa ihe ngwaọrụ Android
Wụnye ngwa ngwa site na ihe "Echichi" na TWRP.
Mgbe ịmaliteghachiri os, anyị ga-enweta ngwọta gbanwere agbanwe na ọtụtụ atụmatụ bara uru maka ndị nwe ngwaọrụ ahụ bi na mpaghara Russia.
Ịwụnye ngwa ngwa ngwa
Ekwesiri ighota na maka Xiaomi Redmi Note 4 (X) enweghi otutu ugwo ngwa ngwa, ma ihe dika ihe omuma ha bu ihe di iche iche nke AOSP - ihe dika "di ọcha". Tinyere ihe ndị ọzọ, ịhọrọ omenala, a ghaghị ịghọta na ọtụtụ ngwọta taa na-ejupụta n'ezigbo mmejọ n'ụdị inoperability ụfọdụ components components.
Dị ka a tụrụ aro maka akwụkwọ ntụziaka 4 nke na-akwadoghị arụ ọrụ nwere ike ịdọ aka ná ntị PROJECT X AOSP, dịka otu n'ime ihe kachasị edozi na ihe na-adịghị edozi. Ị nwere ike ibudata ya site na iji njikọ dị n'okpuru ma ọ bụ na njikwa Xiaomi ọrụ.
Download ngwa ngwa ngwa, Gapps, SuperSU maka Xiaomi Redmi Cheta 4 (X) MTK
Na mgbakwunye na faịlụ zip na omenala, njikọ ahụ dị n'elu nwere faịlụ nbudata nwere Gapps ma SuperSU.
Anyị na-ebuba ebe nchekwa atọ ahụ ma tinye ha na ebe nchekwa nke ngwaọrụ ahụ.
Anyị na-abanye na TWRP-weghachite na -emepụta "ehichapụ" niile ngalaba, ewepu "Nchekwa Ngwaọrụ" ma "Micro SDCard".
Wụnye usoro ngwugwu AOSP, Gapps na SuperSU.
Chere ruo mgbe emechara nwụnye ma malitegharịa n'ime usoro zuru ezu,
Dịka iche na MIUI na-emebu na ngwaọrụ Xiaomi.
Ya mere, e nwere ihe dịka ụzọ ise iji weghachite sistemụ arụmọrụ na Xiaomi Redmi Note 4 (X), dabere na ngọngọ MTK. Dabere na njirimara chọrọ na ahụmahụ onye ọrụ, ị nwere ike ịhọrọ usoro ọ bụla. Isi ihe bụ ịrụ ọrụ ọ bụla n'ụzọ doro anya na nlezianya, na-agbaso ntụziaka maka ngwa ngwa.
https://termotools.com ig.termotools.com © Bios 2019